Tartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya oo 7 bisha December ka furmi doona Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya oo 7 bisha December ka furmi doona Kismaayo
Tartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya oo 7 bisha December ka furmi doona Kismaayo
November 19, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Tartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa a 7 bisha soo socota ee December ka furmi doona magaalada Kismaayo, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay shirk a dhacay Kismaayo oo u dhaxeeyay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliya iyo wasaaraddaha ciyaaraha ee maamul goboleedyada.
Tartanka oo la qorsheeyay in la qabto bishii lasoo dhaafay ee October ayaa baaqday, sababo aan la sheegin.
Tartankan ayaa noqon doona kii labaad oo loo qabto maamul goboleedyada Soomaaliya.
Xidigo ka socday Puntland ayaa ku guuleystay tartankii kowaad ee kubada cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho sanadkii 2016-ka, iyaga oo gool ku laad kaga adkaaday Jubbaland.
March 4, 2018 Ciidanka PSF oo afar miinada wadada lagu aaso ah ku burburshay gudaha Buuraha Galgala
March 22, 2018 Biyo yaraanta iyo raadadka abaareed ee ay ku reebaan Soomaaliya
July 7, 2018 Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax ay Al-Shabaab ka geysaty Muqdisho
April 29, 2018 Shir ku saabsan ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha oo Soomaaliya lagu qaban doono
Baarlamaanka Soomaaliya oo isku raacay in dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya ay ahayd ‘sharci daro’
President Farmajo travels to UAE
Toban ciidamo Turki ah oo lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ay geysteen PKK
Istanbul-(Puntland Mirror) Toban xubnood oo ciidamada amaanka Turkiga kamid ah ayaa lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ka dhacay koonfurta-bari ee dalka Turkiga, sida ay sheegeen warbaahinta maxaliga ah. Lix kamid ah ciidamada [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa xuseysa sanadguuradeedii 58-aad ee maalinta xornimada. 1-da Luulyo ayaa ah maalintii ay gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay madax-banaanidooda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga sanadkii 1960-kii, ayna midoobeen koonfur iyo waqooyi, oo 26-kii [...]